बसमा विद्युतीय टिकट प्रणाली : सजिलो र झण्झटिलो उस्तै | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
बसमा विद्युतीय टिकट प्रणाली : सजिलो र झण्झटिलो उस्तै
बैशाख ८, २०७६ आइतबार ११:५५:४१ | बेदानन्द जाेशी
काठमाण्डाै – झापाका अमित अधिकारी साझा बस चढ्दा खल्तीमा चानचुन पैसा बोक्नुहुन्न । उहाँसँग भाडा तिर्न मिल्ने विद्युतीय कार्ड छ । बसमा चढ्ने बित्तिकै सहचालकलाई कार्ड देखाउनुहुन्छ । सहचालकले त्यो कार्ड मेसिनमा राख्छन् । जहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो, कार्डबाट त्यति नै पैसा काटिन्छ ।
रानीबारी बस्ने अमित लगनखेलको एक प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ । कार्ड प्रणालीले यात्रामा केही सजिलो भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘पहिले घरबाट निस्किँदा गाडी भाडाको लागि भनेर चानचुन पैसाको जोहो गर्नुपर्थ्यो, अहिले ढुक्क छ’ उहाँले खुशी हुँदै भन्नुभयो । तर कहिलेकाँही भने कुनै सहचालकसँग यो मेसिन नै नहुँदा र भए पनि काम नगर्ने अवस्थामा हुँदा भने खल्ती छाम्नुपरेको उहाँको अनुभव छ । ‘त्यसो हुँदा फेरि उही पुरानो ताल’ उहाँले टाउको कन्याउँदै गुनासो पोख्नुभयो ।
बसको टिकट प्रणाली विद्युतीय बनाउने भनेर साझा यातायातले यस्तो प्रणाली लागू गरेको छ । आफूसँग भएका जम्मा ५१ बसहरुमध्ये अहिले ४५ बसहरुमा यस्तो सुविधा रहेको साझा यातायात प्रालिका लेखाअधिकृत गोपालप्रसाद पन्तले बताउनुभयो । २० दिन अघिदेखि स्मार्ट कार्ड बाँड्न सुरु गरेकोमा अहिले १ सय ५० सेवाग्राहीहरुले स्मार्ट कार्ड लिइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘हामी अहिले परीक्षण कालमा छौं, यसको प्रचारप्रसार नभएकाले धेरै कार्ड बिक्री नभएको हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर बिक्री भएजतिबाट भने राम्रै प्रतिक्रिया पाएका छौँ । यसको प्रयोगले सेवाग्राहीलाई मात्र होइन, व्यवसायीहरुलाई पनि राहत पुग्ने छ ।’
आर्थिक चुहावट रोक्न उत्तम विकल्प
भाडा तिर्ने स्मार्ट कार्डको प्रयोगले यात्रुलाई सुविधा त पुग्छ नै । व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्नेछ । विद्युतीय टिकट प्रणालीले आर्थिक चुहावट रोकिने साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधर बताउनुहुन्छ ।
सवारी चालक र कण्डक्टरहरुको मिलोमतोबाटै दैनिक रुपमा उठ्ने भाडामा हिनामिना हुने गरेको र विद्युतीय प्रणाली लागू गरेपछि यात्रुहरुले तिर्ने पैसा सहचालकको हातमा नभएर सिधै बैंक खातामा जाने भएकाले आर्थिक चुहावट नहुने तुलाधरले बताउनुभयो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मात्र साझा यातायातले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको भन्दै उहाँले यसलाई रोकथामग र्न कार्ड प्रणाली सुरु गरेको बताउनुभयो । ‘पहिलेदेखि नै कार्ड प्रणाली लागू गर्न चाहेका थियौँ । तर विविध कारणबस लम्बिंदै जाँदा बल्ल प्रयोग गर्न भ्यायौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।
अब काठमाण्डौ उपत्यकामा चल्ने सबै बसमा स्मार्ट कार्ड अनिवार्य
काठमाण्डौ उपत्यका भित्रचल्ने सबै सार्वजनिक गाडीमा विद्युतीय कार्ड प्रणाली लागू हुने भएको छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले ऐन पारित गर्दै वैशाखभित्र यो नियम कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने बताएको छ ।
ऐनको दफा ३ मा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा कागजी र विद्युतीय गरी दुई प्रकारका यात्रु टिकट प्रयोग गर्न सकिनेछ ।’ ऐनमा थपिएको छ ‘कागजी टिकटको प्रयोगलाई क्रमशः विद्युतीय टिकटले विस्थापित गर्नुपर्नेछ ।’ ऐन पारित भएको १६औँ दिनमा मेयरले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुने महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले गर्दा यात्रुहरुलाई सजिलो मात्र नभएर बस व्यवसायीहरुलाई पनि फाइदा पुग्नेछ ।’ काठमाण्डौ भित्र चल्ने कतिपय बसहरुमा टिकट समेत काट्ने गरिंदैन । कण्डक्टरले कहाँबाट आएको र कहाँसम्म जाने भन्ने सोधेरै यात्रुहरुबाट भाडा लिने गर्छन् ।
तर यो त्यति पारदर्शी नभएको आचार्य बताउनुहुन्छ । यसो गर्दा टाढाबाट चढेका यात्रुले पनि नजिकैबाट चढेको भन्ने गर्छन्, जसले गर्दा बस व्यवसायीहरु मर्कामा पर्छन् । यस्तै कण्डक्टरले पनि कुनै यात्रुसँग बढी भाडा माग्ने गरेको गुनासो छ । यस्तै कण्डक्टरबाट पनि भाडा उठेको रकम हिनामिना हुँदा बस धनीहरु ठगिने गरेका छन् ।
यस्तो गलतकार्यलाई नियमन गर्नको लागि पनि बसमा स्मार्ट कार्ड लागू गर्नै पर्ने महानगरपालिकाको भनाई छ । एउटा स्मार्ट कार्डले नै उपत्यकाभित्र चल्ने असबै बसहरुमा चढ्न मिल्ने बनाउने पनि आचार्यले बताउनुभयो ।
के हो स्मार्ट टिकट, कसरी प्रयोग गर्ने ?
भाडा तिर्न मिल्ने स्मार्ट कार्डमा डेबिट कार्डजस्तै सानो चिप्स जडान गरिएको हुन्छ । जसरी एटीएमले काम गछ, यसको पनि त्यस्तै कामहो । सहचालकको हातमा कार्ड रिडर मेसिन हुन्छ । यात्रु कहाँबाट चढेको र कहाँ ओर्लने भन्ने आधारमा कण्डक्टरले कार्डलाई मेसिनमा रिड गराएर त्यहीअनुसार कार्डबाट पैसा काटिन्छ ।
तर बजारमा यो भन्दा पनि परिस्कृत प्रविधि आइसकेको र चाँडै त्यो ल्याउने प्रयासमा रहेको साझा यातायातले जनाएको छ । त्यसमा बसको दुईवटै ढोकामा कार्ड रिडर मेसिन लगाइन्छ । बसमा चढ्दा पनि र ओर्लिदा पनि कार्डलाई मेसिनमा छुवाउनुपर्छ । सुरुमा कहाँबाट चढेको हो र कहाँ ओर्लने हो भन्ने दूरीको आधारमा कार्डमा भएको पैसा काटिने हुन्छ ।
यो प्रविधि बढी विश्वसनीय भएको साझा यातायातका लेखाअधिकृत गोपालप्रसाद पन्तले बताउनुभयो । स्मार्ट कार्डका प्रयोगकर्ता बढेर बढेपछि सबै बसमा यस्तो प्रविधि जडान गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले बसको न्यूनतम भाडादर १३ र अधिकतम भाडादर २५ छ । यसमाविद्यार्थी र जेष्ठ नागरिकको लागिभनेर फरक कार्ड नबनेको र बिस्तारै त्यस्तो कार्ड पनि बनाइने पन्तले बताउनुभयो ।
विद्युतीय टिकटलाई साझा यातायातको कार्यालय र साझा बसकै कण्डक्टरहरुबाट पनि दुईसय रुपैयाँ तिरेर किन्न सकिन्छ । त्यसमा दुईसय रुपैयाँ नै आउँछ । त्यो रकम सकिएपछि यात्रुले त्यो कार्ड फिर्ता गरेर अर्को कार्ड लिनुपर्ने हुन्छ । मागको आधारमा कार्ड पाँचसय र हजारसम्मको पनि बनाउने पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
कार्डमा समस्या हुने गरेको सहचालकको गुनासो
कहिलेकाहीँ मेसिन बिग्रिंदा त्यसले दुःख दिने गरेको साझा बसका एकजना सहचालकले गुनासो गरे । ‘कहिलेकाहीँ मेसिन आफै बन्द भइदिन्छ, कहिले कुनै रेसपोन्स नै गर्दैन, यसले गर्दा मेसिन थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ’ उनले भने ।
विद्युतीय कार्ड बनाउने जिम्मा इन्क्लाउड कम्पनीले लिएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले भने मेसिन गुणस्तरीय भएको बताउनुभयो । ‘तर कहिलेकाँही चार्ज कम हुँदा राम्रो काम नगर्न सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको लागि सहचालकले पूरा चार्ज गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
As there is msg alert after deduction of money in ATM,likewise Can we know amount deducted from smart card and the remaining balance in that card ??